प्रशासन सेवाकै मनोबल गिराउने गरी मुख्य सचिव नियुक्ती - Jyotinews
बिहीबार, साउन १४, २०७८
प्रशासन सेवाकै मनोबल गिराउने गरी मुख्य सचिव नियुक्ती
ज्योतिन्यूज २०७७ असोज १५ गते १३:१६
१५ असोज, काठमाडौँ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा शंकरदास वैरागी नियुक्त हुनुभएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले बुधबार दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै वैरागीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रशासन क्षेत्रका मुख्य नेताको रुपमा रहने मुख्य सचिव पदमा प्रशासन सेवा क्षेत्रको ब्यक्तिलाई छोडी परराष्ट्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको हो ।
जुन प्रशासन सेवाको पछिल्लो इतिहाँसमै लगभग पहिलो घटना भएको कर्मचारीहरुले बताउँछन् । ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आगामी कात्तिक ७ गते अवकाश पाउने रेग्मीले त्यसको दुई साताअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
मुख्यसचिवका लागि वैरागीसहित, केदारबहादुर अधिकारी, मोहनकृष्ण सापकोटा लगायत दाबेदार हुनुहुन्थ्यो । यसैविच सिधा प्रक्रियाबाट मूख्यसचिवबाट बैरागी विदा भएको खण्डमा यस पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमको पालो आउने देखिन्छ । उहाँ शिक्षा क्षेत्रबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुभएको थियो ।
यस सँगै प्रशासन क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने गरी गरिएको यस नियुक्तीलाई कर्मचारीले भने रुचाएका छैनन् । परराष्ट्र क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई प्रशासनमा ल्याउनुले कर्मचारीमा उत्साह नभएको देखिन्छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषदले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको छ । राजदूतहरुको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिबाट हुने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई कार्यकाल सकिएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनाइएको थियो ।
उनलाई डिफ्याक्टो अर्थमन्त्रीको रुपमा पनि हेरिएको थियो । यसैविच एकै व्यक्तिलाई आधा दर्जन पदमा नियुक्ती दिन सक्ने सरकारले राम्रो काम गरि उचाई बनाएका कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा फेरी पनि नियुक्ती दिन नखोज्दा जनताले सरकारमाथि रोष प्रकट गरेका छन् ।
अफगानिस्तानमा ८९ लडाकू र ४२ आमनागरिक तथा सुरक्षाकर्मी मारिए
डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न आदेश
आज साउन ५ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाइको राशिफल
कांगेसद्वारा केन्द्रीय सदस्य घिमिरेमाथिको आक्रमणको निन्दा
आज २०७८ साउन १ गते शुक्रबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
नेपालमा कोभिड सङ्क्रमणमुक्त हुने दर घट्दो
जसपा संसदीय दलको नेताको चुनाव शनिबार
अफगान सुरक्षाबलको कारबाहीमा परी २३ तालिबान लडाकू मारिए
एन्फा उपाध्यक्ष नेम्वाङमाथि छानबिन गर्न प्रशिक्षक अलमुताइरीको निवेदन
ओलीलाई भयभीत गराएको एउटा प्रश्न : अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए के हुन्छ ?